Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu gaystay Koonfur Afrika - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu gaystay Koonfur Afrika
July 20, 2021 at 07:42 Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu gaystay Koonfur Afrika2021-07-20T07:42:29+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Kooxo Burcad hubeysan ah ayaa xalay magaalada CapeTown ee waddanka Koonfur Afrika ay dil, dhaawac iyo Boob hantiyadeed ay u geysteen dhalinyaro Soomaaliyeed.
Alle ha u naxariistee Axmed Macalin Jimcaale, ayaa dhintay halka Walaalkiis ka weyn ee Maxamed Macalin Jimcaale uu dhaawac yahay, kadib markii ay Kooxo hubaysani weerar ku galeen dukaan ay ku lahaayeen Xaafadda Kraaifontein oo ka tirsan Magaalada Cape Town.
Ciidamo ka tirsan Booliska Koonfur Afrika ayaa tegay halka weerarka uu ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka sameeyay baaritaano la xiriira sida uu dilka u dhacay iyo sidii lagu heli lahaa Burcadii ka dambeeysay dilkaas.
Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa inta badan lagu dhibaateeyaa Ganacsatada Soomaalida ah, waxaana todobaadkii hore rabshadihii ka dhacay meelo kamid ah dalkaas lagu dilay ilaa Afar Dhalinyaro Soomaali ah.
The post Dhalinyaro Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu gaystay Koonfur Afrika appeared first on Puntland Post.
« Shaqa bilic soo celin ah oo xalay laga sameeyay Gaalkacyo
Ethiopia’s Tigray forces enter neighbouring Afar region, Afar says »